Dastabej » ६ वर्षअघि भएको टीकापुर घटनाको एक प्रत्यक्षदर्शीको बयान
६ वर्षअघि भएको टीकापुर घटनाको एक प्रत्यक्षदर्शीको बयान – Dastabej
६ वर्षअघि भएको टीकापुर घटनाको एक प्रत्यक्षदर्शीको बयान
नेपालगन्ज । ६ वर्षअघि भदौ ७ गते आजैका दिन टिकापुरमा भएको थरुहट बिद्रोहका क्रममा एसएसपी लक्षमण न्यौपाने सहित ७ र १ नाबालको ज्यान गएको थियो । त्यसलगत्तै रिर्पोटङका लागि नेपालगन्जबाट कान्तिपुर दैनिकका उपसम्पादक ठाकुरसिंह थारु घटनास्थल टिकापुर पुगेका थिए । उनले १० दिनसम्म कर्फूयमा पासबिना रिर्पोटङ गरेर फर्किएपछि डायरी लेखेका थिए । उनको डायरी जस्ताकोतस्तै ।
‘रिर्पाेटिङका लागि टीकापुर हिड्यो ज्यान । अफिसयली जिम्मेवार पाएपछि फेसबुकमा यही शब्ढ पोष्ट गरियो । घटनाको भोलपल्ट भर्दा८ गते बिहानै नेपालगन्जबाट बन्द छिचोल्दै घटनास्थल तर्फ हुईके । पुर्बपश्चिम राजमार्ग सुनसान थियो । बर्दियाको बांसगढी, भुरीगाउँ लगायतका बजार बन्द थिए । बस्ती रहेको स्थानमा बाक्लो सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए । टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारले सुरक्षा बढाएको हुनुपर्छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज हुँदै चिसापानी पुग्ने बजार भने केही खुलेका थिए । त्यहाँबाट लम्कीबजार पुग्नु थियो । तर, निषेधाज्ञा थियो । बजार पुरै सुनसान र बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीमात्रै थिए । लम्कीपछि दक्षिण तर्फ पर्ने करिव १४ किलो मिटर दक्षिणमा टीकापुर पर्छ । तर, त्यहाँ घटना भएलगत्तै अनिश्चितकालिन कफ्र्यु लगाइएको रहेछ । कफ्र्यु पास थिएन । त्यसैले सहकर्मी गणेश चौधरीले लम्की इलाका प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सुझाए । प्रहरी निरीक्षकले टीकापुर आफ्नो ईलाका नपर्ने भन्दै तर्किन खोजे । जुनसुकै हालतमा पुग्नुपर्ने अडान राखेपछि आफ्नो एरियासम्म स्कटिङ गरिदिए । करिव ४ किलो मिटरसम्म, जहाँबाट कफ्र्यु सुरु थियो । बाटोमा पर्ने राजीपुर, अमौरी, अमौरा, पठ्रैया, तोरैयापुर, दुर्गौली, भगतपुरगाउँ सुनसान थिए । घरका ढोकाहरु बन्द थिए । सडकभरी फुेटका शिशा छरपस्ट देखिन्थे । जलेका टयारका टुक्राहरु देखिन्थे । हिंसात्मक घटना भएको अघिल्लो दिन अखण्ड र थरुहट पक्षबीच भिडन्त भएको तोरैयापुरको पुल नजिकैको सडकमा ढुंगाको अवरोध उस्तै थियो ।
मलाई आगो लगाउन खोज्दा
तोरैयापुरदेखि सडकमा सुरक्षाकर्मी अलि बढी नै देखिए । कफ्र्यु पास नभएकाले सुरक्षाकर्मी देखिन साथ नजिकै पुगेर रोकिन्थे । नेपालगन्जबाट आएको भनेर अनुरोध गर्दा छाडिदिन्थे । कफ्र्यु पास भने कसैले मागेनन् । अवरोध पनि भएन । नेपाल पत्रकार महासंघको ज्याकेट र गाडीमा लेखिएको प्रेसले मलाई सुरक्षा दिएको थियो । तर, सुनसान सडकमा एक्लै हिड्दा डर लाग्थ्यो ।साथीहरुले बजारको अवस्था निकै तनावपूर्ण भएकोले टीकापुर सामुदायिक एफएममा आउन भने । टीकापुरको मुख्य बजार पुग्नु अगावै खडक चोक रहेछ । त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकमीले रोके । फेरि त्यही जवाफ फर्काए । एक कदममात्रै हिडेको थिए । दक्षिणबाट आईरहेका तीन जना अग्ला, प्रहरीजस्तै कपाल र हाफ पाईन्ट लगाएका चार युवाले रोकिहाले । ‘तँ………….होस,’ ती मध्ये अग्लो कद भएकोले आक्रोसयुक्त प्रश्न गर्दै धम्काउए,‘ पेट्रोल ल्याए । यसलाई पनि जलाई दे ।’
म झसंग भए । जीवनमा यस्तो प्रश्न र अवस्था कहिल्यै झेलेको थिईन । ‘म नेपालगन्जबाट आएको पत्रकार हो,’ जवाफ फर्काए । कफ्र्युका बेला मलाई त्यसरी धम्काई रहँदा हतियारधारी प्रहरी एक शब्ढ बोलेन । कफ्र्यु तोडेको आरोपमा गोलीसमेत हान्न पाउने अधिकार पाएको सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न सक्थ्यो । तर, रोक्ने प्रयाससमेत नगरेपछि डराउनु स्वभाविक थियो । त्यसमध्ये एक युवा अलि बुझ्ने रहेछन् । आफ्ना साथीलाई भने,‘यो बाहिरबाट आको हो । मानबीय संबेदनाले पनि छोड्नु पर्छ । तर, समाचार राम्रो लेखेस है चेतावनी दिन भ्याए । हस हजुरबाहेक मसंग कुनै शब्ढ थिएन । टीकापुर एफएम पुगेपछि पत्रकारहरुको अवस्था बेहाल रहेछ । त्यहाँका पत्रकारहरु कतिसम्म डराएका रहेछन् भने रेडियोको अनएयरमा बसेका रहेछन् । म पुगेपछि सहकर्मीहरुलाई केही सहास आयो । त्यहाँका पत्रकारहरुले भन्दै थिए,‘तपाईको सहासलाई हामी सम्मान गर्छौ । तर, यस्तो बेला तपाई नआउँदा राम्रो हुन्थ्यो । घर जान नसकेर सबै पत्रकारहरु करिव १ वजेसम्म भोकै थिए । बजार बन्द थिए । सबैको अवस्था हरिरहेकी नजिकैको एक महिलाले दाल र भात पकाएर खुवाईन । भन्दै थिईन,‘बजार बन्द छ । तरकारी छैन । यही खानुस ।’ उनको मानवीयता देखेर अघि भएको दुब्र्यवहार सबै बिर्सियो ।
फाईल फोटो सबैः ठाकुरसिंह थारु
खानापछि फेरि सबै एफएममै जम्मा भयौँ । अघि भएको घटना साथीहरुलाइै सुनाए । कफ्र्युमा पनि टीकापुरका स्थानीयका घरमा आगजनी भइरहेको थियो । घर जलेको आगोको मुस्लो त्यहाँबाट प्रस्टै देखिन्थ्यो । स्थानीय पत्रकारहरुले फलानोको घर भनेर अनुमान गर्थे । फोटो खिच्न जाने कसैको हिम्मत भएन । एमएफमा जम्मा हुनुुुको एउटै कारण थियो—कम्तिमा यहाँ आगजनी नगर्लन । तर, स्थानीय फूलबारी एमएममा आगो झोसिएको खबर आएपछि स्थानीय पत्रकार पनि त्रसित भए । कफ्र्युको सूचनामात्रै बजिरहेको उक्त एफएम पनि बन्द गर्ने सल्लाह गरिरहेका थिए । एक्कासी पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रकास बिक्रम शाहको फोन आयो । उनले भने—ठाकुर जी, प्लीज तपाई टीकापुरमा नबस्नुस । घटना सम्प्रदायिक भइसक्यो । तपाईको ज्यानको खतरा हुनसक्छ । लगत्तै महासंघका पुर्ब महासचिव पोषण केसीको फोन आयो, एफएमको ल्याण्डलाईन नम्बरमा । भन,‘तिमी टीकापुरमा सम्पर्कबिहिन भएको खबर म कहाँ आएको थियो । अहिले कुन अवस्थामा र कहाँ हो ? नेपाल प्रहरी र सशस्त्रसंग कुरा हुँदा अहिले सुरक्षा दिननसक्ने अवस्था रहेको जवाफ फर्काएका छन् । त्यसैले सेनाको हेलिकोप्टर पठाउने कुरा छ ।’ म सुरक्षित रहेको जानकारी गराएँ ।
त्यसरी मेरो बारेमा हल्ला फैलिएपछि कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधिर शर्मा, समाचार सम्पादक हरि थापा, ब्युरो प्रमुख गंगा बिसी, नेपालगन्ज क्षेत्रीय ब्युरो प्रमुख जनक नेपाललगायतले फोन सम्पर्क गरी अवस्था सोध्नु स्वभाविक थियो । उहाँहरुले पहिले सुरक्षा र त्यसपछिमात्रै समाचार संकलनका लागि सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुलाई ढुक्क रहन भने ।
कफ्र्युमा समाचार संकलन
दिउँसो ३ वजिसकेको थियो । तर, टीकापुर घटनाको समाचार संकलनका लागि पुगेको म एफएममै थुुनिएर बस्नु परेको थियो । कति यसरी बस्नु ? यही बेला काम देखाउने हो । जोखिममा अवसर पनि हुन्छन् भनेपछि साथीहरु समाचार संकलनका लागि तयार भए । नेपाल टेलीभिजनका स्थानीय संबाददाता महेन्द्र भण्डारीले आफ्नै मोटरसाईकलमा बसाएर आगजनी भइरहेका स्थानमा पु¥याई दिन्थे । स्थानीय प्रहरीले उहाँलाई चिनेका कारण त्यो दिनको रिर्पोटिङ सम्भव भयो । मलाई अनुहार छोप्नका लागि हेल्मेट लगाई दिएका थिए । उनको गुण कहिल्यै बिर्सिने छैन ।
होटलको एक्लो पहुना
बास बस्न होटेल सिद्धार्थमा पुगियो । सहकर्मी गणेश पनि आफ्नो घरमा जान सक्ने अवस्था थिएन, कफ्र्युका बेला । घटनापछि त्यहाँ भएका पहुनाले होटेल छोडिसकेका रहेछन् । महेन्द्रनगरका पत्रकार बच्चु विक पनि हामीसंगै थपिएर चार जना भयौँ । राष्ट्रिय मानव मानव अधिकारलगायतका अधिकारबादीहरु त्यस दिन टीकापुर आउने आँट गरेनन् । राति प्रहरीको टोली आयो । थरुहट आन्दोलनका नेताहरु लुकेको शंकामा होटलका कर्मचारीसंग सोधपुछ ग¥यो ।
भिडन्त भएको स्थान
भोलीपल्ट प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भएको घटनास्थल एकाबिहानै पुगियो । घटनास्थल पश्चिम तर्फ पर्ने पशुहाट बजार नजिकै भएको रहेछ । घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको पोशाक र सुरक्षा कवच चलेको अवस्था थिए । स्थानीयको घर नजिकै उक्त घटना भएको रहेछ । उक्त दिनका प्रत्यक्षदर्शीहरु मुख खोल्न मानेका थिएनन् । कुरा गर्दा पनि नाम नलेखिदिन आग्रह गरे । उनीहरुका अनुसार घटनाका दिन पनि १८÷२० प्रहरी त्यहाँ तैनाथ थिए । निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । प्रदर्शकारीहरु चारैतिरबाट नगरपालिका छिर्ने हल्लाले स्थानीय प्रशासने त्यसरी नै सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको रहेछ । तर, पशुहाट बजार नाकाबाट बढी प्रदर्शनकारी आए । घेरा तोड्न खोजे । तैनाथ सुरक्षाकर्मीले आफ्ना प्रमुखहरुलाई जानकारी गराए । नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सशस्त्र प्रहरीको एसपीको गाडीमा बसेर घटनास्थल पुगे । प्रदर्शनकारीले निषेधाज्ञा तोड्न खोज्दा उनी अगाडि बढेर सम्झाउन खोजेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । तर, आक्रासित भिडले नमानेपछि अश्रु ग्यास प्रहार भयो । भिड झन उग्र भयो । र, प्रहरीले गोली नचलाएर पछाडि हट्यो । त्यी मौका पाएका प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीबाट जाई लागे । घरमा लुक्न खोजेका एसएसपी न्यौपानेलगायत माथि संघातिक आक्रमण गरे । ८ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो ।
समाचार माध्यममा सुरक्षाकर्मीको एकहोरो कुरा आउन थलोपछि भोलीपल्ट गाउँ छिर्ने कुरा भयो । तर, कफ्र्यमा सुरक्षाको चिन्ता भने उस्तै थियो । जे भएपनि जानै पर्ने थियो । टीकापुरबाट गाउँ हिडियो । हिंसात्मक घटनापछि गाउँका स्थानीय नयाँ अनुहार देख्नसाथ स्थानीय भाग्थे । स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाका लागि आश्वस्त पार्न नसक्दा गाउँ खाली भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । दुबै समुदाय लम्की, धनगढी, बर्दियाको राजापुरलगायतका आफन्त र छिमेकीका घरमा गएका छन् । टीकापुर आसपासका जोशीपुर, मनिकापुर, कन्चनपुर, मुनुवा, दुर्गौलीलगायतका युवाहरु गाउँ छोडेपछि महिला, बृद्ध र बालवालिकाहरु मात्रै बाँकी छन् ।
७ भाद्र २०७८, सोमबार १२:३० प्रकाशित